China Cantilever Rack Kugadzira uye Fekitori | Huade
Cantilever racks ari nyore kuisa uye anochinjika ekuchengeta marefu, akakura uye akawandisa masosi kunge matanda, mapaipi, trusses, plywoods zvichingodaro. Cantilever rack ine ikholamu, base, ruoko uye bracing. Inowanikwa yeRimwe divi kana maviri mativi.Cantilever rack inogona kuve matatu marudzi: light basa mhando, yepakati basa mhando uye rinorema basa mhando.
Nyore kushandisa, kumberi kwakavhurika pasina makoramu, zvichibvumira kurodha nekukasira. Zvishandiso zvinochengetwa uye zvakagadzwa pamaoko nedivi forklifts kana stacker cranes, izvo zvinogona kudzikisira basa rinosanganisirwa nekutambidza mari
MariRudzi urwu rwekuchaira rwakaderera-kudhura uye rwakaderera-kurasika.Zvishoma zvinhu kupfuura zvechinyakare pallet storgae masherufu uye magumo akavhurwa zvinoreva kuti kureba kwekuchengetedza mutoro kwakawedzera pasina kuwedzera kumari yekuchengetedza. Ndizvozvo Zvemari sarudza.
Zvichienderana, Hapana mamwe makoramu, kurodha kunogona kuiswa kune iyo kureba kwecantilevel rack rafu.
Kusarudza, nzvimbo dzakashama dzinozivikanwa nekukasira.
Kuchinjika, cantilever rack inogona kuchengeta chero mhando yemutoro. Izvi zvinoponesa nguva uye mutengo wevashandi.
Cantilever Racks ane zvikamu zvina
Base, inotsigira yakatwasuka nemaoko pakatakura mutoro. Nheyo yacho yakasungwa zvakachengeteka pasi kana pasi pevhu.
Akarurama, batanidza muchigadziko kutsigira maoko; maoko anogona kugadziridzwa akatwasuka.
Arm, Inotambanudza kubva kune yakatwasuka inobata mutoro wakachengetwa, anogona kunge akatwasuka kana kumusoro kumusoro pamakona akasiyana zvichienderana nezvinodiwa zvezvigadzirwa zviri kuchengetwa.
Horizontal / X bracing, kubatanidza kusimudzira, kupa kugadzikana, kuomarara uye simba.
Cantilever racking inogona kuunganidzwa mune akawanda musiyano imba yekuchengetera, kazhinji ichipesana nemadziro edivi rimwe uye kudzoka kumashure kumativi maviri. Iyo nzvimbo iri pakati pezvisimudziro inogona kugadziridzwa kuti ikwane mune chero kona mune yako imba yekuchengetera kuti inyatso kushandisa iyo yese inowanikwa nzvimbo.
Huade Cantilever Rack, yako yakanyanya kunaka sarudzo.
Pashure: Nhovo Racking System
Zvadaro: Katoni Kuyerera Rack